၂၀၂၁ ခုနှစ်တရုတ်ရောင်း ၀ ယ်မှုအရောင်းရဆုံး D-ring Adjustable Ankle Straps Wrist Band လေ့ကျင့်ခန်းကြံ့ခိုင်မှုကြံ့ခိုင်ရေးအသုံးအဆောင်များထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ | NQ
၂၀၂၁ တွင်ရောင်းရန်ရှိသည် D-ring Adjustable Ankle Straps Wrist Band သည်လေ့ကျင့်ခန်းကြံ့ခိုင်မှုကြံ့ခိုင်မှုအတွက်အသုံးအဆောင်များဖြစ်သည်
ခြေချင်းဝတ် Cuff Pulley ကြိုးများကို Nylon Straps နှင့်ပြုလုပ်ထားသော Padded Neoprene နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၁၀ လက်မအရှည်နှင့် ၄ လက်မအကျယ်
ချိန်ညှိနိုင်သောချိတ်နှင့်ကွင်း Velcro ပိတ်ခြင်း
Chrome ချထားတဲ့ Double d-ring ပူးတွဲပါချိတ်များ
Universal Size သည်အားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်
ခြေချင်းဝတ်/လက်ကောက်ဝတ်သိုင်းကြိုးသည်သင်၏လက်ရှိ Resistance Band များထဲသို့ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းများထည့်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဦး တည်သောကြွက်သားဧရိယာ: နောက်၊ Triceps၊ စုစုပေါင်းခန္ဓာကိုယ်၊ ခြေထောက်၊ လက်
တီးဝိုင်းကိုဒူးအထက်တွင် တင်၍ ရှည်လျားသောခြေလှမ်းများကိုရှေ့၊ နောက်သို့၊ ဘေးတိုက်လုပ်ပါ။ ရွေ့လျားခြင်း၊ ဓာတ်လှေကား၊ ဆွဲဆန့်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်းနှင့်ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းများအားလုံးအတွက်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောနွေးထွေးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ပူနွေးလာခြင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာသောလူနေမှုဘ ၀ ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ခြေထောက်များ၊ glutes & တင်ပါးတို့အတွက်ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အားလုံးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဤသက်တောင့်သက်သာရှိသောတင်ပါးဆန့်ကြိုးများကိုသုံးပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီသင့်တင်ပါးဆုံရိုးအားအကြောလျှော့ခြင်းကို သုံး၍ သင်၏ကြွက်သားများကိုဖွင့်ရန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်၊ ပုံစံကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ခုခံအားကောင်းရန်နှင့်အားဖြည့်ရန်၊ သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ပြန်လည်နာလန်ထရန်နှင့်ဆန့်ရန်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျားသစ်စေ့၊ နာမည်ကြီးမက်မွန်နှင့်စကျင်ကျောက်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည့်ပုံမှန်အရောင်များ၊ ထုံးစံပုံစံများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အရောင် MOQ သည် 1 piece ။ Peach body band သည်ယခုနှစ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
၁။ သေးငယ်သောအားကစားရုံသုံးပစ္စည်းများအတွက် PP အိတ်တစ်လုံးစီနှင့်သေတ္တာတစ်လုံးထဲသို့အများအပြား
၂။ သီးခြားထုပ်ပိုးခြင်းသည်အထပ်သားထည့်အိတ်တစ်ခုတွင် ၆၀၀ မှ ၈၀၀ ကီလိုဂရမ်စီရှိသည်။ (သစ်သားစစ်စစ်မဟုတ်၊ AU နှင့်ဥရောပသို့ပို့ရန်အဆင်ပြေသည်)
၃။ ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ညှိနှိုင်းပါ။
1. Professional Service ဖြစ်သည်
2. အနိမ့် MOQ
တက်ကြွ။ ကျန်းမာသောနေထိုင်မှုပုံစံရှိသောအမျိုးသမီးများအတွက်သီးသန့်ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးထုတ်လုပ်သည်။ အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်သုံးရအဆင်ပြေပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပါသည်။ ဒါဟာမမှန်ပါဘူး။ အဲဒီအစားငါတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစမ်းသုံးကြည့်ပြီးမင်းသူတို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့အာမခံတယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ပန်းရောင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူကပန်းရောင်ကိုမကြိုက်တာလဲ။
ယခင်: Battle Rope Poly Dacron လေ့ကျင့်ခန်း Undulation Ropes Gym Muscle Toning ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းအားကစားကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်း
နောက်တစ်ခု: NQ အားကစားရေစိုခံ Eva Gym Foam Eco Friendly High Density Premium Cork Yoga Block